Fihla ngo-17-iKhosi yeGalufa e-Leelanau
I-condo esebenzayo kwiKhosi yaNdala eSugarloaf. Ikhitshi ehlaziyiweyo, ifenitshala yanamhlanje (umatrasi okumgangatho ophezulu), isofa yokulala, i-jetted tub enkulu, i-intanethi ekhawulezayo, intambo, kunye nepatio yabucala.
5 imiz. ukuya eGood Harbour Beach, i-10 min. ukuya eLeland kunye ne-30 min. ukuya eTraverse City. Ukufikelela ngokulula kwimisebenzi emangalisayo yonyaka wonke. Ifanelekile kwigalufa, i-adventure yangaphandle okanye uhambo lokungcamla iwayini, okanye ukutshintsha nje imbonakalo yendawo yomsebenzi okude. Izinto eziluncedo kunye nochuku olucinga kakhulu. Amanyathelo okucoca ngokucokisekileyo.
Ukubuyela ubusika okugqibeleleyo! Jabulela yonke into eyenziwa yiLelanau County ebusika. Ungawela ilizwe lokutyibilika kunye ne-snowshoe ngaphandle komnyango ongasemva okanye uthathe ithuba lezinye iindlela ezininzi zasebusika ezikufutshane. Yonwabela ii-wineries kunye neendawo zokutyela ezipholileyo zommandla ngaphandle kwezihlwele kunye neminyhadala eyonwabisayo kunye nezinto ezikhethekileyo. Yiza ekhaya kunye nefilimu njengoko ujonge amagqabi atshintshayo kunye nekhephu eliwela kwikhondo legolide.
I studio enkulu enendawo esebenza kakhulu kunye nefenitshala. Yonke into oyifunayo kwaye akukho nto ungenayo. Yonwabela ifanitshala entsha, yale mihla, ibhedi etofotofo kakhulu kunye nesofa (ibrand yomfana owonqenayo enesofa yokutsala). Itafile enkulu enendawo eninzi yokutya okanye ukusebenzela kude. Igumbi lokuhlambela elikhulu elineshawa kunye nebhafu enkulu yejacuzzi. Ikhitshi elimiswe kakuhle elinesitovu, ioveni yokuhambisa imicrowave kunye nazo zonke izitya kunye nezinto zokupheka ozifunayo. Hamba ngqo uphume ngomnyango wesilayidi uye kwipatio yakho yabucala kumngxuma we-17. Le condo ithambile kwaye ithambile unyaka wonke. Uninzi lokuchukumisa okucingayo kunye nezinto eziluncedo kulo lonke.
Ukuba uhlamba umhlobo wakho onoboya, nceda ufunde imigaqo yezilwanyana kwicandelo lemithetho ngocoselelo phambi kokuba ubhukishe.
4.88 ·Izimvo eziyi-33
Indawo egqibeleleyo yeLelanau County. Ngaphantsi kwemizuzu emi-5 ukonwabela enye yezona ndawo zintle iilwandle, iZibuko eliLungileyo. Kufuphi ne-Sleeping Bear Dunes National Lakeshore, kuhambo olungenasiphelo lwangaphandle. Yonwabela iidolophu ezikufuphi zaseCedar, Leland kunye neGlen Arbor ukuze utye kwaye uthenge. Iitoni zemizi yewayini ekufutshane. Ngaphantsi kwemizuzu engama-30 ukusuka edolophini iTraverse City.
Uya kuba nokufikelela ngaphandle konxibelelwano kwi-condo. Njengabamkeli bakho, siyafumaneka ngefowuni, i-imeyile okanye isicatshulwa kuyo nayiphi na imibuzo onayo malunga nendawo okanye malunga nommandla. Siyathanda ukwabelana ngezindululo zethu zokutyela esizithandayo, iindawo zokukhwela intaba kunye neendawo zokuthengisa iwayini, khawubuze nje!
Uya kuba nokufikelela ngaphandle konxibelelwano kwi-condo. Njengabamkeli bakho, siyafumaneka ngefowuni, i-imeyile okanye isicatshulwa kuyo nayiphi na imibuzo onayo malunga nendawo…